China Steel Conveyor Roller Kugadzira uye Fekitori | Joyroll
Simbi Yekutenderera Roller
Simbi yekuendesa roller ndeyezvikamu zvebhandi rinotakura masisitimu sezvavanopa rutsigiro rwemutoro padivi rekutakura uye kudzoka divi.
Conveyor chinotendereraizvo zvinhu zvemabhanhire anotakura masisitimu sezvavanopa rutsigiro rwemutoro padivi rekutakura uye kudzoka divi. Iyo yekufambisa roller yakaenzana uye yakagadzirirwa maererano neIO, DIN uye EN zviyero. Tsika dzakagadzirwa rollers anowanikwa pakukumbira. JOYROLL ane anokwanisa kununura hwakawanda hweakasarudzika-dhizaini rollers: mvura chiratidzo rollers, rollers kune akanyanya mamiriro ekunze, conveyor roller yekunyanyisa kurodha, kumhanya kumhanya yekutenderera, yakaderera ruzha rollers, rollers emakemikari mamiriro uye kesi-akaomarara ma roller.
Nongedzo:Roller dhayamita: 89, 102, 108, 114, 127, 133, 140, 152, 159, 165, 178, 194, 219mmRoller Length: 100-2400mm.Shaft dhayamita: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mmKutakura mhando: 6204, 6205, 6305, 6206, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310Surface Treatment: Electrostatic Powder Coating, Galvanization.Standard: DIN, CEMA, JIS, AS, SANS-SABS, GOST, AFNOR nezvimwe.
RAW ZVINOKOSHA OF ROLLERS:1.Pipe: Yakanyanya kunyatsoita ERW yakakosha pombi ine diki kunze kwekutenderera. Chinyorwa Q235 yakaenzana neEurope S235JR2.Shaft: Yakakwira chaiyo inotonhora-inotorwa bhaa yakatenderera, Chinyorwa 45 # yakaenzana neDIN C45. Kaviri Chisimbiso,Hunhu Giredhi P5Z34.Kubereka Imba: Cold yakavhomorwa simbi ndiro, zvinhu 08AL zvakaenzana DIN ST12 / 145.Mukati Chisimbiso: Lip mhando chisimbiso, Chinyorwa Nylon. 6.Labyrinth Seal: Chinhu chiri Nylon. 7.Lubricating Girisi: inogara ichizora mafuta, kushanda mamiriro -20 ° c kusvika 120 ° c8.Surface Kurapa: Electrostatic Powder Coating
DZICHIBUDA1. Yakaderera Yakazara Yechiratidzo Kumhanya-kunze (TIR), pasi kutenderera kuramba; 2. Kupedzisa cap kune chubhu welds yakachengetedzwa kubva kune yerabha bhandi kusakara; 3. Yakanyanya-inoshanda labyrinth zvisimbiso zvinodzivirirwa kubva kuguruva & mvura mukutakura; 4. Yakagadzirwa uye inogadzirwa kwehurefu, husina matambudziko hupenyu; 5. Kugadziriswa-kwemahara, yemhando yepamusoro yakavharwa bhora rinotakura.
KUSHANDISAKucheraSteel millCement chirimwaPower chirimwaChemical PlantGungwa PortStorageetc.
Zvadaro: Kuzvigadzirisa Kuzvidzora Idler
Rabha Disc Kudzoka Roller
Rabha Impact Roller
Simbi Conveyor Rollers
Simbi Spiral Kudzoka Roller
Rubha Yakakwenenzvera Roller